Ime na "ọgụgụ isi" ka Mbanye-na-Web Mgbasa Ozi | Martech Zone
Ime na “ọgụgụ isi” na-akwọ ụgbọala-to-Web Mgbasa ozi
Tuzdee, Machị 21, 2017 George Leon
Mgbasa "ịntanetị na ntanetị" nke oge a karịrị nanị ịkwanye ndị na-azụ ahịa na ibe ọdịda njikọ. Ọ na-akwado teknụzụ na sọftụwia ire ahịa nke na-agbanwe agbanwe, na ịghọta otu esi emepụta mkpọsa siri ike na nke ahaziri iche na-arụpụta nsonaazụ weebụ.
Mgbanwe na Mgbado Anya
Otu uru nke ụlọ ọrụ dị elu dị ka Hawthorne nwere bụ ikike ile anya ọ bụghị naanị na nchịkọta, kamakwa ịtụle ahụmịhe onye ọrụ n'ozuzu ya na njikọ aka ya. Nke a bụ isi ihe na-adọta ma na-ejigide ndị ọbịa na weebụsaịtị ndị na-eme ihe, ikike iji kwekọọ ọdịnaya na omume ndị ahịa na ọchịchọ. Ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ijikọ ọdịnaya ha na ọwa niile dị, ma ọ bụ TV, OTT, ma ọ bụ mgbasa ozi mmekọrịta - ekwesịrị ịkọwa ọdịnaya ahụ site na omume n'ezie. Izipu ihe eji egwu okike aghaghi ịdabere na njiri oriri na ndi nke elere anya ya anya, ya mere ahia gha agha ihe eji eme ya.
Marketinglọ ọrụ ịzụ ahịa dị elu nwere ike ịhụ njikọta n'etiti nzaghachi siri ike na ntụgharị na ahụmịhe onye ọrụ na omume, wee bulie ọdịnaya na ada iji melite usoro ịkwọ ụgbọala na-weebụ.
Teknụzụ Dị Mkpa
Hakọta data nke mbụ na nke atọ dị mkpa. Nke a gụnyere ọ bụghị naanị ịghọta ihe onye ọbịa na-eme na webụsaịtị na oge, mana omume ha na-eme tupu ha erute saịtị ahụ. Ime nke a kwekọrọ na mkpọsa na saịtị yana ihe na-ewu ewu maka ịhazi aha mmadụ, ebe data sitere na nyiwe dị iche iche dị iche iche na-achịkọta iji zụlite nghọta nke ezubere iche maka mmadụ. Ijikọta ọtụtụ isi mmalite data na-achọ Nnukwu data nchịkọta na nghọta nke ihe data dị mkpa n'ezie maka ịmịpụta nsonaazụ dị mma nke ndị ahịa.
Iwulite otutu data banyere omume ndi nleta na webusaiti choro ka akwadoro nke oma. Ntọala teknụzụ nke usoro a bụ iji pixel tracking iji nyochaa omume nke onye ọbịa ọ bụla. Ejiri ihe karịrị 1,000 pixel trackers, ndị njikwa mkpọsa nwere ike iwulite "akwụkwọ egwu" nke onye ọ bụla bịara. Ha nwere ike ịmalite site na pikselụ nsuso UX, nke na-enye ohere webụsaịtị ka ọ na-emewanye ndozi nke na-eme igodo / ịzụta / itinye n'ọrụ nke saịtị ahụ ọsọ ọsọ na mfe. A na-ejikwa pixel onye na-eweta data nke atọ mee ka ị nwee ike ịhụ kuki ndị ọzọ na-esochi onye ọbịa - na-enye ọkwa dị mkpa nke data ndị ọzọ. Nlekọta ntinye aka na mgbasa ozi bụ ihe ọzọ iji nweta data, site na iji ngwaọrụ nsuso iji mezie ọrụ mmekọrịta mmadụ na mkpọsa. Isi ihe nke usoro ndị a? Iji mee ka nkewa nke oge na ịchọta ihe ka mma ma meziwanye saịtị ahụ maka ndị ọbịa n'ọdịnihu.
Ibute njikarịcha n'ime Omume
Ka onye na-ere ahịa na-adọta data, ha nwere ike ịmepụta ọdịnaya na-agbanwe agbanwe n'ezie nke kwekọrọ na omume na njirimara. Ọdịnaya ahụ na-ahaziri mmadụ iche na ngwaọrụ ahụ. Nke a bụ ihe onye ọ bụla nọ na ụlọ ọrụ ụgbọala na-aga na ntanetị ka ha lebara anya, mana ha na-asụ ngọngọ na otu esi ejikwa akụkụ niile na-agagharị. Obi dị m ụtọ, e nwere ngwa ọrụ ọgbara ọhụrụ dị ebe ahụ (yana ndị nwere ahụmịhe na hel) ndị nwere ike ịnye nghọta iji hazie ọdịnaya na nnyefe ozi.
Tụlee omume ndị a kachasị mma maka mkpọsa mgbasa ozi ịkwọ ụgbọala na-aga n'ihu na ntanetị:
Ghọta ngwaahịa a. Ekwesiri ịhazi nkwekọrịta n'etiti izipu ozi iji kọwaa ngwaahịa a na ihe ọ ga - ewe iji mee ka onye na-azụ ahịa site na nghọta ka ọ rụọ ọrụ.
Kwadoro ozi na ngwaọrụ. Advanced nchịkọta-chụpụrụ mkpọsa ga-enwe data na họọrọ ọdịnaya ekiri ngwaọrụ na mgbe ahụ ga-ịgbanwe ọdịnaya ya.
Gbanwee atụmatụ mgbasa ozi. Kwadoro ngwakọta mgbasa ozi iji kwekọọ n'àgwà ndị ahịa anakọtara site n'aka onye ọrụ nchịkọta, ịghọta ọdịiche dị na ọrụ (ma ọ bụ ngwaahịa nlekọta anụ ahụ ma ọ bụ teknụzụ.)
Evolution nke Web
Gbakwunye ụdị ka ukwuu nke “ọgụgụ isi” na mkpọsa na-na web na-emesi ike ka mgbanwe web gbanwere. Anyị si na “ọgụgụ isi na ebe nrụọrụ weebụ” na ọdịda peeji nke na portals, na mgbe “web 2.0.” Ma ugbu a, anyị na-agbanwe n'ụdị ọzọ, yana weebụsaịtị webụsaịtị bụ ọnọdụ izizi, yana ike ịnye ụfọdụ ndị ozi ọdịnaya. Weebụsaịtị ahụ abụkwaghị ebe a ga-ewe iwu, ọ bụ ezigbo isi iyi nke nghọta nwere ike iji wuo nkewa, ma n'otu oge ahụ bulie ma bulie mkpọsa na mgbasa ozi. Nke a bụ ụzọ ọhụụ esi eme ịkwọ ụgbọala gaa na web, nke na-emegide usoro mkpuchi nke iru ọtụtụ anya dịka o kwere mee ma nwee olile anya na ụfọdụ n'ime ha ga-eme ihe.
Ndepụta nke ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ bụ nke a na-achọkarị, yana dịka ọmụmaatụ ike ịlele oge ole onye zụrụ na-atụgharị "ịzụta ugbu a" tupu ha pịa. Firlọ ọrụ na-akpọsa ngwá ahịa na ụdị ndị chọrọ ka ihe ịga nke ọma na-adịte aka na mgbasa ozi ịntanetị ga-amata ọgụgụ isi data. Ima ihe abughizi ebum n’obi ya, o bu maka ichiche agwa ndi a.
Tags: ad adnnukwu datambanye na-webevolushọnmbụ onyeosisi hawthornenwere ọgụgụ isi na ebe nrụọrụ weebụmbido peeji nkenavigationkeonweọnụ ụzọngwaahịa ozizuoozugboezigbo oge nkewaezubere icheonye nke atọitinye n'ọrụux pixel nsusonleta esenowondị ọbịa2.0 web
George Leon na-elekọta HawthorneUsoro mgbasa ozi, ogbugbu, sayensị data na nyocha na nnọchite nke ndị ahịa buru ibu gụnyere 3M, Nwanna International, Equifax, Hamilton Beach, HomeAdvisor.com, Transamerica na zulily. Hawthorne bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-emeri mmeri nke nkà na ụzụ na-ahụ maka nchịkọta na nchịkọta akụkọ maka ịza ajụjụ maka afọ 30.
Ewepụtara m otu afọ site na ọgbakọ, nke a bụ ihe merenụ